Kana hupenyu huchikupa zana yezvikonzero zvekudonhedza nekuchema, ratidza hupenyu kuti une mamirioni zvikonzero zvekunyemwerera nekuseka. Gara wakasimba. - Anotungamira - Quotes Pedia
Kana hupenyu hukakupa zana zvikonzero zvekutsemuka nekuchema, ratidza hupenyu kuti une miriyoni zvikonzero zvekunyemwerera uye kuseka. Gara wakasimba. - Asingazivikanwe
Hupenyu haumboputi. Iwe uchave nezvakawanda zvikonzero zvekutsemuka, kunzwa kupwanyika, uye kuchema. Nekudaro, ita shuwa kuti hausi kuzvibvumira kuti ugare wakakundwa neshungu nematambudziko ehupenyu.
Hupenyu huchakupa zana yezvikonzero zvekudzokera kunze, unzwe sekunge warasa zvese zvawakambove nazvo, asi ita shuwa kuti uri kusimuka zvakanyanya kupfuura izvo!
Iwe haufanire kungotarisa izvo zvisina kunaka zvehupenyu, asi unofanira zvakare kutarisa pazvinhu zvakanaka zvanga zvichiitika kwauri. Kutarisa-tarisa, iwe unowana akawanda zvikonzero zvekunyemwerera uye kuseka futi! Sarudza ivo pane kushushikana nezvekusuwa.
Kusiyana kudiki pamaonero edu kunogona kuita zvishamiso zvehupenyu hwedu. Izvo zvakakosha kuti isu tirambe takasimba. Hupenyu huchave nekukwira kwayo nekudzika
Pachave nenguva apo iwe uchinzwa wakanyatsopunzika, uye ipapo pachave nemamiriro ezvinhu paunonzwa sekunge uri kusimuka, uye kuita zvakanaka, kunyemwerera, uye kuseka moyo wako kunze.
Nakidzwa kutarisisa pane zvakanaka zvinhu, uye edza kuzvinunura pachezvakaipa. Ukangozviita, iwe uchaona sekunge hupenyu hwave hwakanaka kupfuura zvawaimbofungidzira kuti zvichave!
Iva nesimba, uye ramba uchishanda. Chinja zvaunofunga gadzira zvishoma, uye iwe uchawana zvinhu zvakanaka zvinoitika zvakakukomberedza.
Iva Akasimba Quotes
Iva Akasimba Quotes Mifananidzo
Kuva Yakasimba Quotes
Akakosha Quotes Nezve Hupenyu
Kukurudzira Quotes Nezve Hupenyu Uye Mufaro
Akakwana Quotes Nezve Hupenyu
Quotes Pamusoro pekuva Akasimba uye Anofara
Gara Wakasimba Quotes
Gara Wakasimba Quotes Nezve Hupenyu
Kugara Yakasimba Quotes
Akasimba Uye Akashinga Quotes
Hupenyu Hwakasimba Quotes
Vakasimba Vanhu Quotes
Yakasimba Quotes Nezve Hupenyu
Kuedza Kuve Akasimba Quotes
Regedza kucheuka. Hapana chiripo. Kupora kwako, maropafadzo, nezvishamiso zviri pamberi pako, kwete kumashure kwako. - Asingazivikanwe
Regedza kucheuka. Hapana chiripo. Kupodzwa kwako, maropafadzo, nezvishamiso zviri pamberi pako, kwete kumashure…
Tese isu tinokomborerwa neakasiyana akasiyana kugona uye matarenda. Sezvatinokura, tinofumurwa…
Kusurukirwa hakusi kunzwa kana uri wega. Kusurukirwa ndiko kunzwa kana pasina munhu ane hanya. - Asingazivikanwe
Kusurukirwa hakusi kunzwa kana uri wega, imhando yemanzwiro yaunowanzo ...